Somtel oo Soo Bandhigtay Adeegyo casri ah oo qiimo jaban[Sawirro] | SAHAN ONLINE
Somtel oo Soo Bandhigtay Adeegyo casri ah oo qiimo jaban[Sawirro]
GAALKACYO – Shirkadda Isgaarsiinta somtel ayaa waxaa ay soo bandhigtay adeegyo casri ah oo qiimahoodu aad u hooseeyo, bulshaduna muddo sugaysay in ay hesho.
Adeeg yadaan ayaa lagu soo bandhigay xaflad lagu qabtay magaaladda Gaalkacyo, waxaana ay adeegyadaaa isugu jiraan kuwo ku hadal ah iyo kuwo Internet ka taeefoonka laga isticmaalo, sida uu qeexay madaxa ganacsiga shirkadda Somtel, waana sidaan.
Adeega 3G oo la casriyeeyey, xawaarihiisuna aad u sareeyo.
Adeega KOBCIYE: waa adeeg aad ku isticmaalaysid internetka Taleefoonka, 2G, 3G ama 4G, waxaana aad helaysaa Xirmooyin, Xadaysan ama Muddaysan oo qiimahooduna hooseeyo xawaarahooduna sareeyo.
Adeegyada KAABE: waa adeeg macaamiisha fursad usiinay in ay bisha oo dhan ku hadlaan lacag cayiman oo ah $5, Puntland oo dhan.
Adeega KAAFI: waa adeeg ay macaamiishu ku shubanayaan $10, bisha oo dhanna ay la hadli karaan dhamaan Soomaaliya.
Adeega XOGDOON: Waa adeeg kuu sahlaya in aad heshid qodobada wararka ugu waaweyn, macmiilka ayaa isagu isdiiwaan galinaya (926).
Maareeyaha gud ee Shirkadda Somtel Puntland, oo xafladdii maanta kasoo qayb galay, ayaa waxaa uu macaa miisha uga mahadceliyey kasoo qayb galkooda, waxaana uu goobta ka cadeeyey, in aty shirkaddu iibin doonto Saamiyaal.
Macaa miil kala gadisan oo kulanka ka hadlay, ayaa shirkadda ku amaanay in ay u dabacsan tahay shacabka, qiimaheeduna uuyahay mid isku mid ah meel kasta oo ay joogto.
Gudoomiye kuxigeenka Gobolka Mudug oo sooxiray kulanka, ayaa sheegay in ay Somtel timid xili aad loogu baahnaa, waxaana uu ku bogaadiyey dadaalka ay ugu jirto, in ay dadka reer Puntland ka dhigto kuwo aduunka la jaanqaada.